ubumba Inwetshiwe - i material imvelo esetshenziselwa ukwahlukanisa. Kuyinto elimbudumbudu ukungena nakwamanye amazwe okuyinto etholakala kule nqubo ye ubumba labadubuli. Inqubo ekudaleni impahla kuhilela izinyathelo ezimbalwa.
Ekuqaleni, ubumba siyakhukhumala kulelo izuzwe ukushaqeka abukhali ezishisayo. Ngenxa yalokho, kungenzeka ukuthola elimbudumbudu ukungena nakwamanye amazwe. Ebusweni elingaphandle umkhiqizo is bhotela, futhi ngenxa yalokho izinze futhi iqine, kanye ukuthola ikhono lokubekezelela zonke izinhlobo mathonya. Ayikwazi ngokuthi ingozi kuchazwe into kwakuqala ukwanda okunjalo namuhla, ngoba phakathi zako - ikhono eliphezulu ukuba agcine eziningi ukushisa.
enwetshiwe ubumba amafraktjhini zingase zihluke, lokhu ipharamitha kuncike ubuchwepheshe. Kusukela senqubo yokukhiqiza futhi kuxhomeke ekutheni kuzoba impahla limenyezelwe kufanelekile izinga izici. Phakathi izici eziyinhloko kufanele ezigqanyisiwe:
ezingeni lelisetulu amandla;
isilinganiso kahle izindleko futhi izinga.
Keramzit babe ngisho ngesizathu ukuthi unakho umsindo kakhulu futhi ukushisa ukwahlukanisa, ezahlukene amakhemikhali inertness, akesabi umlilo, futhi engakutholanga kwamazinyo. Ngokufunda lesi sihloko, kubalulekile ukwazi ukuthi yini ingxenyenamba enwetshiwe ubumba ezikhona, kodwa futhi amaphutha, okumele kwenziwe isibaluli ukuthambekela we zithutha ukuncela ketshezi, ukuze kancane kancane wome. I elimbudumbudu zintekenteke, lokhu okuyinhloko akumelwe bakhohlwe inqubo ngokugcwalisa impahla. Phakathi kwezinye izinto, ubumba enwetshiwe is best isicelo njengoba backfill ezomile.
Njengoba yaziwa, izakhiwo zokuhlala ngezitini cozier futhi kunakwezinye labo ezakhiwa ngokhonkolo. Clay, okuyinto ngaphansi ukwelashwa ukushisa, esebenza wokuba umbhidisi kunalokho abampofu ukushisa nokubanda okukhulu. Ukwakha ngobumba landiswa sinezici efanayo, lokhu kungenxa isakhiwo ukungena nakwamanye amazwe. Nokho, abathengi abaningi bezibuza ukuthi iyona conductivity ezishisayo material. Lokhu ipharamitha alinganiselwa 0.12 W / MK. Nokho, kumelwe futhi bacabangele kanye uqhekeko. I elimbudumbudu futhi babe nezinye izakhiwo ukuthi aziwe ngakho.
Kumele amandla kuphawulwe. Lapho uvivinyo ziqhutshwa phezu kokucindezelwa, bona sikwazi ukuqondisisa ukuthi ubumba enwetshiwe wabhubhisa 13% wezindleko. Lokhu kuholela kungenzeka ukudala ungqimba uphawu material inikezwe. Lapho kuziwa impahla zandiswa ke zingahlukaniswa zibe izinhlobo eziningana, ngayinye okuzodingeka kwabantu abathile.
Uma kuwukubonisa M450 ingxenyenamba okuyinto kuhluka 10 kuya ku-20 mm, kwabantu kuleli cala kufana 440 kg / m 3. Uma Nokho, ngaphambi kokuthi uphawu M500, ukuminyana salo 465 kg / m 3. Izingxenyana ubumba enwetshiwe - akulona VO okufanele ifundwe. Kubalulekile ukwazi futhi kucishe kube isisindo ethize, uba i value ekahle uhla 0.95 g / cm 3. Ngenkathi kwabantu ngobuningi kuncike ngokuqondile ezicini eziningana, lapha ukufaka usayizi okusanhlamvu. Ngakho, lapho enwetshiwe ubumba kukhishwa nezingxenyana ezithile 30 mm ngamunye imitha cubic of ozokufunda kuzokusiza nesisindo 340 kg.
Ukusetshenziswa ngobumba landiswa
Uma uthi nhlá kungase kubonakale sengathi ububanzi bokusebenzisa ubumba enwetshiwe akuyona njengoba ebanzi, kodwa akuyona. I elimbudumbudu sikwazi ukulondoloza ukushisa kahle, ngakho endlini nge ukwahlukanisa ezinjalo kuba ethokomele. I izakhiwo impahla uvumele ukusebenzisa kwayo i-zifudumele kokufulela, iphansi futhi ukwahlukanisa of attics. Kwakuvamise ukhonkolo block ngisho njengoba ungqimba ecashile. I elimbudumbudu ingasetshenziswa njengesisekelo udala screed ukhonkolo.
impahla asetshenzisiwe ngisho nalapho ulahla isisekelo. Ngenxa ukusetshenziswa ubumba zandiswa kungenzeka ukunciphisa base amabhukhimaki ekhaya izikhathi 2 ukujula, lokhu konga impahla iphinde ivimbele okokuqandisa phansi emhlabeni isisekelo. ubumba Expanded isetshenziswa futhi ukwakhiwa izindlu ezinhle zokugeza, ipayipi kubekwa, kanye izindlela engadini engadini. Yisebenzise futhi ukwakha isimiso sokukhuculula elikuvumela ukuba sifinyelele ezithela ephakeme.
Imininingwane engenhla is oluqanjwe namazinga kazwelonke elawula ingxenyenamba. Lokhu ipharamitha ziyahlukahluka kusuka 5 kuya ku-10; kusuka 10 kuya 20 nokusuka 20 kuya 40 mm. Ngemva kokuhlaziya imibhalo, ungakwazi ukuqonda ukuthi enwetshiwe ubumba yamathebhu uhlukaniswe 10 izinhlobo, okuyinto zingafani kwabantu, lokhu ipharamitha ziyahlukahluka kusuka 250 kuya ku-800.
izinhlobo Main: enwetshiwe ubumba amatshe
ubumba Expanded, ingxenyenamba, intengo okuzokwenza kube nentshisekelo umthengi, uvezwa ukudayiswa ngesimo enwetshiwe ubumba uhlalwane. izindleko zayo ngalinye imitha cubic kuyinto ruble 1350. Lokhu kwaziswa ine uhlobo zithutha ngenhloso ngaphandle ukungena nakwamanye amazwe zazo elicibilikile ngaphansi ukushisa.
Le mikhiqizo une-kobujamo obusaqanda, kanye Kwamanzi ababethi umbala brown amnyama. Ekuqaleni kwawo-black ebonakalayo. Lokhu enwetshiwe ubumba izinhlawulo unamahlangothi ku ezahlukene 5 mm. Inkomba enkulu ifinyelela 40 mm. Phakathi izici eziyinhloko kufanele kwenziwe amanzi angangeni, kanye ukungabi khona izinto contraindicated usimende, nokumelana umlilo.
enwetshiwe ubumba amatshe
Le nto etholwe nokuqeda foamed mass enwetshiwe ubumba izingcezu. Uma iqhathaniswa nezinhloko-amatshe ke impahla ine ukuma emincane. Esikhathini ukukhiqizwa sezindawo engokwemvelo ubumba esetshenziswa, futhi kwathatha isimo sokugcina senzeka bedle ukushisa.
enwetshiwe ubumba isihlabathi
Ukukhiqiza enwetshiwe ubumba isihlabathi engomunye izindlela eziningana. Eyokuqala kuhilela ukusetshenziswa kuhhonela rotary, kwesibili - usebenzisa esithandweni mpo, kuyilapho okwesithathu kuhilela ukusetshenziswa kobuchwepheshe lokukhanda. Ukuze uthole 0.5 m 3 yesihlabathi kufanele uchithe imitha cubic of eseqedile ubumba ukunwetshwa. I kwabantu of isihlabathi ezinjalo ziyahlukahluka kusuka 500 kuya 700 kg / m 3.
Ukukhethwa kwamafrakshini laying phansi
Expanded ubumba phansi okuyinto ingxenyenamba ngokuvamile kuhluka 5 kuya ku-10 mm, isisekelo isixazululo lapho yengezwe isihlabathi, amatshe namanzi. ubumba Expanded ochotshoziwe Itshe ingxenyenamba zokhahlamba kusuka 10 kuya 14 mm, kuvame kakhulu ukuba kusetshenziswe ekwenzeni ukhonkolo. Uma uyazibuza ngalokho ucezu enwetshiwe ubumba phansi izosetshenziselwa, kufanele sinake futhi Expanded ubumba amatshe, esetshenziselwa ukupaka ukukhanya kanye phansi namandla futhi abe Usayizi 5 kuya 40 mm. Nokho, lapho ukuxuba kuyadingeka ukusebenzisa ingxenyenamba ku ezahlukene 5 kuya ku-10 noma-10 kuya ku-20 noma engu-20 kuya 40 mm. Lapho kunesidingo ukuhlela screed mncane, ukusetshenziswa enwetshiwe ubumba isihlabathi ingxenyenamba akuyona kuka-5 mm. enwetshiwe ubumba ingxenyenamba ekhethe tie kuye ngabe ekamelweni lapho ohlela ukusebenza futhi yini ubuchwepheshe izosetshenziswa ngesikhathi esifanayo.
Namuhla, ezindaweni ezahlukene Russia enwetshiwe izenzo ubumba njengesisekelo sokwakha mass. Nguye ephumelela kunazo ungase ucabangele ukusetshenziswa kwalo womshini izitembu izitini M300 ukuze M500. Ekhuluma amandla eqine ke imikhiqizo idatha, lesi sibalo kuhluka 5 kuya 7.5 MPA.
Kuryanovskoy ukwelashwa izindawo - eziyinkimbinkimbi for ekwelapheni emanti langcolile zasemadolobheni eMoscow
Steel R6M5: nezinhlamvu, isicelo
Nokukhanda ezishintshayo izinqubo ukukhiqizwa
Le ndawo wenduduzo. Indlu yangasese design usayizi elincane egumbini
Indlela ukuguqula ekhaya lakho ibe ejimini?
Kubukwa kanjani replays wehlelwe - izeluleko namathiphu
Uyini kwemali futhi kanjani they ihlukaniswa
Hiberfil.sys - kuyini? Indlela yokususa hiberfil.sys ku-Windows 7 kanye ne-Windows 8. Ngingaba susa hiberfil.sys
Okubekiwe esifundeni laseMoscow. neziqhingana bemvelo
Ibhethri Solar izivakashi kanye nabahamba
Ukuze sifinyelele eziphakeme, kubalulekile ukuba sihlaziye impumelelo yomuntu siqu ekupheleni konyaka
Indlela ukuze alulame SMS asusiwe "Android" nokuvikela idatha yakho
Serena Williams: ukuphakama, isisindo, Ubukhulu kanye biography ithenisi
Kuyini ukulondeka kokwaziswa